यति पढ्न समय छैन? नर्सको हकहितमा बोल्नेहरु एक शेयर गर्नुहोला – Khabar Patrika Np
यति पढ्न समय छैन? नर्सको हकहितमा बोल्नेहरु एक शेयर गर्नुहोला
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १९, २०७८ समय: ९:३८:२१
हेर्नुहोस हामी भने दिनरात खेटिनेे हाम्रो लागि यति पढ्न समय छैन? नर्सको हकहितमा बोल्नेहरु एक शेयर गर्नुहोला, भिडियो सहित, कोरोनाको पहिलो लहर सकिन नपाउँदै नेपालमा फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर आइएसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था सम्हाल्नै नसिकने अवस्थामा पुगेको सञ्चारमाध्यमबाट हेरिरहेका छौं।
समाचार सुन्दा र हेरदा जिउ नै सिरिङ्ग हुन्छ। हातगोडा लुलुक हुन्छन् अनि आँखाबाट आँसु झर्न थाल्छ। हाम्रो देशमा पनि अवस्था झन् झन् बिग्रिँदै गइरहेको छ। दिनप्रति दिन संक्रमितको संख्या बढ्दै छ भने मृत्युदर पनि बढ्दो क्रममा छ। यस्तै हो भने हाम्रो देशमा पनि भारतको जस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न।
कोरोनाको पहिलो चरणमा पनि युद्द मैदानमा केही नभनी होमिनेमा हामी स्वास्थ्यकर्मीहरु नै हो। स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम मोलेर भोक, निन्द्रा, परिवार केही नभनी संक्रमितलाई ठिक पार्न निरन्तर खटिनै रहे। फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मीको अथक प्रयासले कोरोनाको पहिलो चरण लगभग पार गर्न सक्षम भइएको थियो**साथै यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्नको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,
हामीले हाम्रो बलबुद्दि र विवेकले भ्याएसम्म कोसिस गर्यौं। हाम्रो इमान्दारीता र हामिले गर्नु पर्ने धर्म निभायौँ तर करोनाको पहिलो चरणको सुरुवाती दिनमा हामि स्वास्थ्यकर्मीका लागि यो गर्छौ त्यो गर्छौ भनेर ठूलो ठूलो भाषण दिने सरकारले महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि के गर्यो?
कोरोनाको लहर बढेसँगै सबै अस्पतालमा नर्सिङ कर्मचारीको आवस्यकता पर्दछ। सबै अस्पतालले यति जना नर्स चाहियो भनेर विज्ञापन निकाल्छन्। बेरोजगार नर्स दिदिबिहिनीहरुले आवेदन पनि दिन्छन्। यस्तो समयमा कामको अवसर त मिल्छ तर कि त न्यून तलबमा कि त आन्तरिक सहमतिमा कति महिने करार मा हो।
नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार भने जस्तो छ। अस्पताललाई पैसा कमाउनु छ। थोरै तलबमा काम लगाएर धेरै आम्दानी गर्नु छ। नर्सलाई जागिर चाहिएको छ किनकी बेरोजगार बस्नु भन्दा थोरै तलब लिएर जोखिम मोल्न तयार छन्**साथै यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्नको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
कोरोनाको पहिलो चरणमा जस्तै आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि भकाभक नर्सिङ कर्मचारी निकालिन्छन्। सोझो अर्थमा भन्नु पर्दा युज एण्ड थ्रो” यसको बारेमा बोलिदिने हाम्रो लागि कुनै निकाय छैनन्। न सरकार छ, न हाम्रो भनिने कुनै संघ सस्था ले नै बोल्छ।
यहाँ नर्सको लागि भनेर खोलिएका संस्थाहरु त झन् कहाँ के गरिरहेका छन् अत्तोपत्तो नै छैन। यहाँ कति नर्स श्रम शोषणमा परेका छन्, कुन अस्पतालले कति तलब दिएको छ, कसले भत्ता दिएको छ, को नर्स साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका छन् भन्ने कुराको बारेमा कहिले चासो दिएको जस्तो लागेन।
खाली दलको फेरो समातेर कुदेको मात्र देखिन्छ। नर्सहरु आफैँ काम गरे गर्छन् मरे मर्छन् हामीलाई के को चासो भन्दै कानमा तेल हालेर बसेका छन्। यहाँ अरु श्रम शोषणमा परेको कसलाई के मतलब छ र **साथै यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्नको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,